Sarimihetsika tokony ho hitanao alohan'ny handehanana any New York | Vaovao momba ny dia
Sarimihetsika hijerena alohan'ny handehanana any New York
Raha alaim-panahy handeha any Etazonia ianao ary handeha any amin'ny tanàna lehibe any New York, dia alao antoka alohan'ny handraisanao ny pasipaoronao fa nahita ny sarimihetsika tsara indrindra tokony ho hitanao ianao alohan'ny handehananao. Na te-hivezivezy amin'ny lalana 50 ianao, raha te-ho any Las Vegas na hankafy ny jiro amin'ny alina any New York, Aza adino ireo sarimihetsika tsy maintsy jerena ireo alohan'ny hanombohanao manangona.
1 Rehefa manomboka dia ...
2 Ireo any ivelany any New York
3 Fararano any New York
4 Roa andro any New York
5 Firaisana ara-nofo any New York
7 Fonenana irery 2: Very tany New York
8 Rehefa hitan'i Harry i Sally
9 Ireo Ghostbusters
Rehefa manomboka dia ...
Rehefa manomboka dia lavitra ianao, ny zavatra voalohany tianao hatao dia ny mitady fampahalalana momba ilay toerana alehanao. Matetika isika dia mitady fampahalalana amin'ny Internet, amin'ny alàlan'ny torolàlana na amin'ny fijerena sarimihetsika mihitsy aza. Manaraka izany dia tiako ny milaza aminao momba ny sarimihetsika azonao jerena alohan'ny handehanana any New York City.
Afaka mahita horonantsary maro ianao miaraka amina lohahevitra romantika, hetsika, hatsikana ... misy sarimihetsika marobe mampiseho anao zavatra, toerana ary firaketana momba an'i New York izay afaka manampy anao hanomboka tsara ny dianao. Aza adino ity lisitra manaraka ity izay namboarinay ho anao.
Ireo any ivelany any New York
Raha miverina amin'ny taona 1999 isika dia mahita ity sarimihetsika nataon'i Steve Martín lehibe ity. Amin'ity horonantsary ity dia manandrana manome fotoana hafa ho an'ny tenany ny mpivady manambady izay manana olana akaiky sy akaiky ny fianakavian'izy ireo farany rehefa mahaleo tena ny zanany farany. Mpivady izy ireo satria noho ny fahazarana sy ny taona maro niarahana dia nangatsiaka loatra ny fitiavany.
Ny hevitra momba ny vintana faharoa ary mamerina ny fitiavany dia mametraka azy ireo tsy hamorona fiainam-baovao any New York, izay azo atao ny zava-drehetra ... ary koa romansa faharoa. Tetikasa tantara an-tsary izay mampiseho anao kely amin'ity tanàna ity ary mety hahatonga anao haniry hitsidika ireo toerana rehetra miseho eny an-tsehatra.
Fararano any New York
Sarimihetsika romantika manohana ny hatsarana izay mitranga any New York City, ity horonantsary tsy azonao adino ity: Autumn any New York. Sarimihetsika tamin'ny taona 2000 izy io ary tantara tena miavaka. Ao amin'ity sarimihetsika ity hanao Keane Izy dia lehilahy sahabo ho XNUMX taona miaraka amin'ny fitiavam-bolo sy fanodikodinana manintona ny vehivavy rehetra Izy no tadiaviny fifandraisana madinidinika ary tsy misy fatorana ara-pientanam-po.
Saingy hanomboka hiova ny fiainany iray manontolo rehefa mihaona amin'i Charlotte Fielding izy, vehivavy iray raiki-pitia aminy amin'ny alàlan'ny mijery azy voalohany fotsiny. Vehivavy tanora kokoa noho izy izy, manan-kery sy falifaly be. Saingy misy ny fatiantoka, ity vehivavy mahafinaritra ity dia voan'ny aretina lehibe. Tsy misy isalasalana, ankoatry ny maha film izany dia hanampy anao hahafantatra bebe kokoa an'i New York CitySarimihetsika mahafinaritra hanamarika anao io.
Roa andro any New York
Raha miverina amin'ny taona 2011 isika dia hitantsika ilay sarimihetsika 'Roa andro any New York'. Amin'ity horonantsary ity dia ahitanao tovovavy Paris iray izay manambady amerikana iray izay niverina tany amin'ny tanàna nahaterahany ary fotoana fohy taorian'io noho ny tsy fitovian-kevitra ara-kolontsaina nampisarahan'izy ireo.
Ity vehivavy ity rehefa avy nisaraka dia mahita fitiavana amin'ny lehilahy hafa miaraka amin'ny fianakaviana tsy mitovy amin'ny an'ny taloha, Fianakaviana misimisy kokoa izy io ary tsy maintsy manam-paharetana ianao raha afaka manohy ny fifankatiavana am-pitiavana vaovao sy mitazona ny fitiavana ny sakaizanao ankehitriny. Fa ankoatry ny fijerena an'ity sarimihetsika ity dia afaka mitsidika toerana maro any New York ianao amin'ny alàlan'ny efijery. Aza misalasala manoratra azy rehetra mba hahafahanao mitsidika azy ireo avy eo amin'ny dianao mankany amin'ity tanàna lehibe feno fahagagana ity ary amin'ny toerana rehetra azo atao.
Firaisana ara-nofo any New York
Ity sarimihetsika tamin'ny 2008 ity dia nandrasan'ny mpankafy ny fahitalavitra. Ny firaisana ara-nofo sy ny tanàna dia momba ny fiainan'i Carrie Bradshaw (Sarah Jessica Parker) sy ireo namany. Amin'ny maha mpanoratra azy dia tian'i Carrie ny mizara ny fomba fijeriny momba ny firaisana sy ny fitiavana, saingy rehefa nifindra niaraka tamin'ny sakaizany vaovao izy. Rehefa manapa-kevitra ny hanambady amin'ny fiainanao ianao ... ny marina dia sarimihetsika tena tsara ihomehezana sy ankafizinao eo am-panondroanao ireo toerana any New York izay tianao ho fantatra.
Iray amin'ireo sarimihetsika tokony ho hitantsika rehetra ireo. Sarimihetsika 2013 izay tianao tokoa. Miorina amin'ny tantara marina momba an'i Jordan Belfort, mpivarotra stock stock tanora izay manomboka miakatra ny dingana mba ho lasa ambony. Ny fiainany dia mihodina mankany amin'ny lafiny maizin'ny fiainana miaraka amin'ny asan-jiolahy, kolikoly ... fa mampiala voly ihany koa ity sarimihetsika ity manome anao ny fotoana hitetezana an'i New York City miaraka amin'i Leonardo Di Caprio.
Fonenana irery 2: Very tany New York
Ity sarimihetsika ity dia avy amin'ny taona 1992. Sarimihetsika mahatsikaiky izay hiafaran'i Kevin McCallister any New York izay ahitany ireo mpangalatra ratsy indrindra eto an-tany. Ao amin'ny sarimihetsika dia ho hitanao ny antony maha-toerana fialan-tsasatra an'i New York City, na dia 'mandositra' aza ianao miaraka amina mpangalatra tsy mahalala fomba roa ary tsy misy fanaraha-maso ataon'ny ray aman-dreny.
Rehefa hitan'i Harry i Sally
Ity sarimihetsika ity dia avy amin'ny 1989 ary tsara ho an'ireo izay tia tantaram-pitiavana. Mpivady mivory, tsy mifandray intsony, mivory ary very fifandraisana indray… Ao amin'ity horonantsary ity dia hahita faritra maro any New York toa ny Central Park izay ho tianao hotsidihina avy eo. Ary koa, ity sarimihetsika ity dia hampisaintsaina anao raha mety ho sakaiza tokoa ny lehilahy sy ny vehivavy na tsia.
Ity sarimihetsika 1984 ity dia mety indrindra ho an'ireo izay tia horonantsary fiction ary hahafantaranao ireo faritra maro eto an-tanàna. Na dia tsy mieritreritra aza ianao fa misy fanahy sy demonia ao New York izay tokony hotadiavinao, dia sarimihetsika mampiala voly izay hanampy anao hahafantatra tsara kokoa an'i New York City.
Ireto misy sarimihetsika azonao jerena alohan'ny hitsidihanao an'i New York City, manome soso-kevitra filma hafa ve ianao izay heverinao fa ilaina jerena alohan'ny handehananao mankany amin'ity tanàna mahafinaritra ity?
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny dia » tanàna » New York » Sarimihetsika hijerena alohan'ny handehanana any New York
Fitsangantsanganana an-dranomasina Baltika 2016